Fatwas sy voina tamin’ny fivahiniana masina..ao amin’ny bilaogy Maraokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2018 6:40 GMT
Tena mavitrika tokoa ny herinandro lasa teo tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Maraokana ary mitohy ny adihevitra mikasika ireo lohahevitra samihafa, ary tena mahaliana. Niresaka momba ny loza farany tamin'ny hajj, ankoatra ny lohahevitra hafa ireo bilaogera Maraokana. Niresaka momba ny Fatwa vao haingana ihany koa izy ireo ny amin'ny tokony hanaovana akanjo anatiny mandritra ny fotoana .. fanaovana firaisana!
Taorian'ny sivana maromaro nitranga farany tany Shina, ary mahakasika ireo mpanao gazety bilaogera, manoratra i IBAHRINE raha tokony fehezin'ny lalàna ireo orinasan'ny aterineto mba hiantohana ny fanajan'izy ireo ny fahalalahana miteny. Mihevitra ny mpanoratra ny A Meta Blog on Arab blogs fa misy antso eo an-koditra amin'ity tolo-kevitra ity, ary tsy azo tanterahina ny hevitra.
Nilaza i IBAHRINE fa mahagaga aloha ny fanambaran'ny governemanta milaza amin'ireo orinasa ny fomba tokony hitondrany tena manoloana ny lahateny.
Araka ny efa nampoiziko, tamin'ny herinandro lasa teo dia bilaogera marobe no namoaka momba ny korontana nitranga nandritra ny fombafomba fitoraham-bato tamin'ny andro farany tamin'ny Hajj ary namoizana mpanao fivahinianana masina an-jatony.
Nomen'ny DB lohateny hoe “362” ny lahatsorany, manondro ny isan'ny maty tao anatin'izany loza izany. Ary nanontany tena izy raha tsy maintsy manao izany amin'ny fotoana mitovy ihany koa ny rehetra, satria tsy azo atao tsotra izao fotsiny.
Karim indray milaza amin'ny lahatsoratra fohy sy feno hatezerana momba ny loza, fa porofo iray mampiseho – izay antsoiny hoe- tsy mivoatra amin'ny lalana marina ny firenena an-dalam-pandrosoana izany.
Sonia kosa namoaka momba ny fatwa iray izay mihevitra fa fahotana ny fanaovana firaisana miboridana.
Milaza i Sonia fa tokony hifantoka amin'ny olana lehibe kokoa fa tsy mandany fotoana sy hery miresaka antsipirihany mampihomehy tahaka izany ireo mpihevitra Miozolomana.
Sahiran-tsaina i Reda raha nandre fa nisy fatwa mangataka amin'ny mpifankatia mpivady mba hanao firaisana miaraka amin'ny atin'akanjo. Ary manontany tena ao amin'ny lahatsorany izy raha tsy manana zavatra tsara kokoa atao ireo mpitoriteny Islamika.
Vao mainka gaga i Reda raha nandre fa nisy fatwa hafa avy amin'i Ayatollah Khomeini tenany izay efa maty, manome alalana ny olona ho afaka manova ny taovam-pananahan'izy ireo…
Larbi indray nandefa lahatsoratra momba ny fatwa iraniana ary toy ny mahazatra, mahaliana ny mijery ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsorany. Mazava ho azy fa tsy nifantoka tamin'ny lohahevitra fototra navoakan'i Larbi ny adihevitra antserasera, ary nitohy momba ny andrana virtoaly amin'ny fatwas ny fanehoan-kevitra saingy ny tena mahaliana dia ny bilaogin'i Larbi,Comme une bouteille jetee la la mer! izay nandritra ny andro maromaro, lasa sehatra tena izy amin'ny fifanakalozan-kevitra sy hevitra samihafa momba ny finoana Silamo.
a to z blogging indray dia bilaogy miavaka manokana, ary miresaka ireo hevitra mety mahatonga ny bilaogy hita ho faly kokoa ny mpanoratra azy. Manazava amin'ny antsipiriany ny fomba fampiasana azy na ny mibaiko izany. Manome fanazavana bebe kokoa mihitsy aza izy rehefa mamaly ireo fanehoan-kevitra. Tsidihiko matetika ity bilaogy ity ary tena loharanom-baovao lehibe ho ahy izany.
Ma vie est un peu celle des autres (Ny fiainako dia misy an'ny hafa kely ihany koa) dia karazana bilaogy ahatsapanao fahafinaretana rehefa mamaky ny lahatsorany ianao.